Ukuphupha ngesidumbu Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Umfanekiso wesidumbu uthumela ukuphola kumqolo wabantu abaninzi. Ngokungafaniyo nephupha lika ukufa okanye ukubulala, umntu ofileyo angabonakalisa ingozi yokwenene ekuchazeni iphupha. Nokuba umngcwabo kunqabile ukuba uzive ungakhululekanga njengokujongana nomzimba ofileyo, umzekelo, ngexesha lotyando lwesidumbu, kwindawo yokugcina izidumbu okanye emakhazeni. Mhlawumbi ukhe wabona ukwahlulwa kwesidumbu ephupheni?
Isidumbu esimthubi, esomeleleyo esinentetho engenanto emakhazeni sisoloko sidlala indima ephambili kumaphupha amabi; ngequbuliso umzimba ongaphiliyo uye ulale xa uvula umnyango okanye ikhabethe. Ukuba umfi sele eqala ukubola, imvakalelo yokucekiseka kunye nokugodola ephupheni ibaluleke kakhulu kwaye iyaqhubeka kwiiyure ezimbalwa emva kokuvuka kubusuku obubi. Ukudibana nesidumbu samanzi ephupheni ngokuqinisekileyo ngamava awoyikisayo, njengomzimba obolileyo ophoswe emanzini. Ukufunyanwa kwesidumbu embokweni wombulali nako liphupha eliphazamisayo.
Ungalibali ukuba kuya kufuneka ubandakanye yonke imiba, Oko kukuthi, yonke imifanekiso yamaphupha, kuhlalutyo lwakho njengenxalenye yokutolika okupheleleyo. Le kuphela kwendlela yokuqinisekisa ukuba uphawu lwephupha elinentsingiselo ekuthiwa ayilunganga ngokunxibelelene namanye amalizo afumana intsingiselo entsha. Ukuze ungalibali imifanekiso oyifumene kwiphupha lakho, kuyacetyiswa ukuba ugcine iphephandaba.
Kukwakho nentsingiselo ekhethekileyo yomfanekiso wephupha "wesidumbu" kutoliko lwamaSilamsi. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngayo, funda inqaku lethu kwisimboli yamaphupha ethi "Corpse of Islam".
1 Uphawu lwephupha «isidumbu» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isidumbu» - ukutolika kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isidumbu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isidumbu» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba uhlangabezana nesidumbu ephupheni, oku kubonisa ukutolikwa ngokubanzi kwephupha. Ubudlelwane y IimvakaleloOko bekufanele ukuba kwenzeka ngaphambili. Nangona kunjalo, uyaqhubeka nokujongana nezi ngxaki nangona zingakwenzeli nto.
Ukuba umntu unxibelelanisa le nkcazo nomnye umntu kwimeko yephupha, mhlawumbi umnqweno wokufa kwakhe uvela kulo mntu. Nangona kunjalo, le ngcaciso ikude kakhulu kwiingcinga zekhonkrithi zokubulala; i-subconscious izama kuphela ukuzihlukanisa ngokwengqondo nomntu onengxaki ngexesha lokulala.
Izidumbu zikwabonakala rhoqo kumaphupha abantu abakubo msebenzi abanelisekanga; Ngaphandle kwemizamo yakho yokutshintsha into kule meko, iya kuqhubeka ixesha elide.
Ngokomgaqo, imvakalelo obuyive ephupheni xa udibana nesidumbu ikwasisigqibo sokutolikwa kwephupha. Zibuze: Ngaba ndandisoyika xa ndabona iintsalela ephupheni? Ndothukile? Okanye bendinethemba kuba ndikubona ukufa njengenkululeko? Ukungabikho kwemvakalelo kunentsingiselo:
Ukuba iphupha lesidumbu alikhange libangele naziphi na iimvakalelo ezizodwa ephupheni, abafileyo banokuba yimifanekiso Umhlobo ukuba ngaphakathi el mundo ngokwenene. Uthando luphelile kwaye ubudlelwane buphelile; ukujonga okungathathi hlangothi kwesidumbu kubonisa ukungabikho kwemvakalelo malunga nesi sibini. Ngapha koko, ukunqongophala kwemvakalelo kunokubangelwa luhlobo lwe "rigor mortis" apho kuhlala umntu. Mhlawumbi ulahlekelwe yimvakalelo yobungqongqo kwaye uzive ungenanto ngaphakathi.
Ukuba iphupha lesidumbu yayingamava amahle kuwe kuba imvakalelo yenkululeko ikoyisile, isimboli ithetha Ukuphumla y ukubuyela ngaphakathi. Unokufuna ukubuphelisa ubomi bakho njengoko bunjalo kwaye uqale ngokutsha.
Ukuba kutshanje bekukho isijwili kusapho okanye kwisangqa sabahlobo abaphuphayo, isidumbu ekuchazeni iphupha sinokuthetha ukuba ekugqibeleni lo mntu ukhululwe ngokufa. Mhlawumbi umntu omthandayo wagula ixesha elide? Ikamva nalo Ukwahlulahlula Esi sibini sinokumelwa ngokomfanekiso ephupheni elinjalo.
Ukuba ilahleko kunye nosizi yayiyeyona mvakalelo iphambili ephupheni malunga nesidumbu, ke eli phupha lalingamava amabi kuwe, ke unokoyika kakhulu ukunyathela endaweni ebomini. ukungenzi y Ukungakwazi ukwenza emva koko bafuziselwa ephupheni ngabafileyo.
Ukuba umntu obhubhileyo ubonakala eswelekile kwaye evuka kwakhona ephupheni, oku kukwabonisa ingxaki yephupha: imalunga nokuma kunye nokukhula okumileyo.
Ukuba ungumntu onolwalamano oluluqilima lweemvakalelo nabanye, isidumbu ekuchazeni ngokubanzi iphupha nalo limela elakho. Uloyiko lokuphulukana. Ukuba iqabane lakho okanye ilungu losapho liswelekile, kunokwenzeka ukuba ubandezeleke kakhulu; Zama ukungaluvumeli uloyiko lukulawule. Qaphela ukuba zonke izinto eziphilayo zidlula ngokukhawuleza.
Ezinye iindlela ngokubanzi zokutolika izidumbu emaphupheni zezi:
Abo balala ebhokisini / emngcwabeni: iinkxalabo zisemnyango
Ukuqhola iqokobhe elibulalayo: kufika isimanga esibi
Ukuthwala isidumbu kwi-suitcase: isazela esinetyala, elidlulileyo lishiya ngasemva
Izidumbu kwibala lomlo: imfazwe kunye nokwahluka kwezopolitiko kwikamva
Isidumbu kwisigqubuthelo-ufuna ukuzigcina ungowokwenene kuwe
Beka imali emehlweni esidumbu: bayakuxhaphaza ngokwezoqoqosho
Beka imali kwiliso elinye: ubutyebi obulahlekileyo bunokufunyanwa kwakhona
Amalungu omzimba ayabonwa: isimemo sokubonisa iimvakalelo ngokucacileyo ngakumbi.
Uphawu lwephupha «isidumbu» - ukutolika kwengqondo
Ukuba ufumene isidumbu ephupheni, lo mfanekiso wephupha awunakubonisa kuphela ingozi, kodwa kunye nengozi. imposiso okanye enye Cwepa cebisa kwakudala. Abafileyo banokubonisa ubudlelwane obuphele ngexesha elidlulileyo, iinkalo zobuntu okanye iimvakalelo, ukuqhubeka nomqondiso, "abakangcwatywa."
Zibuze ukuba ngaba ikhona na imiba evela kwixesha lakho elidlulileyo ekunokukhathaza kwaye noxinzelelo lwengqondo. Ngaba wenze impazamo ekukhathazayo nanamhlanje? Jongane ne. Amava angaqhubekekiyo kunye neemvakalelo zinokuba nefuthe elikhulu kuphuhliso lwethu.
Uphawu lwephupha «isidumbu» - ukutolika kokomoya
Ekuchazeni amaphupha okomoya, isidumbu sinokuhambelana nezinto ezithile zobuntu bephupha njengomfanekiso wephupha. Ezi ndawo zakho zinokubangela iingxaki ngalo mzuzu-ungahamba-hamba Iimvakalelo, iingcinga y Iimeko zobomi ziyingozi.
Qonda iphupha lakho lesidumbu njengenkuthazo yokujonga kwakhona imeko yakho yeemvakalelo kunye nokuphelisa ukungqubana ngaphakathi nangaphandle ebomini bakho. Thatha ixesha lokujongana neengxaki zakho.
Ukubonakala kwesidumbu okanye amalungu omzimba kwihlabathi lamaphupha kuyenza icace gca indlela ukungazi okungathi okunempembelelo ngayo kumxholo wamaphupha ethu; Amava amabi awenzekayo kuthi ngelixa siphaphile ahlala enefuthe kumaphupha ethu; ukucinywa ngokupheleleyo akunakwenzeka.